Dawlada Somalia Oo Ciidamo Hor Leh Geysay Dhuusamareeb | Sanaagmedia — Warar Sugan
Dawlada Somalia Oo Ciidamo Hor Leh Geysay Dhuusamareeb
November 4, 2019 - Written by admin
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saaka markale ciidamo geysay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, kuwaas oo diyaarad looga qaaday magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Ciidamadan oo ah kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa gaaraya illaa 50 askari, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada dowlada goboleedka Galmudug.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan lagu xoojin doono kuwa dowladda ee ku sugan halkaasi, islamarkaana ay la wareegi doonaan xarumaha ay shalay ka baxeen kuwa maamulka gobollada dhexe ee Ahlu Sunna Waljamaaca.
Dowladda Soomaaiya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ciidamo ku daabulisay Galmudug oo uu weli ka taagan yahay khilaaf ka dhashay arrimaha doorashooyinka la filayo in dhowaan ay ka dhacaan maamulkaasi.
Sidoo kale arrintan ayaa ku soo aadeysa, iyadoo labadii maalin ee la soo dhaafay xiisad xoogan oo u dhexeysa dowladda iyo Ahlu Sunna ay ka taagneyd magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Xaaladda Galmudug ayaa sii xumaaneysa, waxaana uu hardanka u dhexeeyaa dowlada dhexe iyo hoggaanka Ahlu Sunna oo raba inay awood muuqata ku yeeshaan maamulka cusub ee la doonayo in loo dhiso Galmudug.